सत्तारुढ नेकपाका युवा नेताले पार्टी बैठक अनिश्चित बन्दै गएपछि शीर्ष नेतृत्वमाथि दबाब बढाउन थालेका छन्। नीति निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण निकाय स्थायी समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ।
विधानअनुसार ३ महिनाभित्र बस्नुपर्ने स्थायी समिति बैठक असार २१ यता बस्न सकेको छैन। यही अल्झनले दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच ३ जेठमा भएको एकता प्रक्रियाले तल्लो तहसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। केन्द्रीय सचिवालयमै पनि तल्लो तहसम्मको पार्टी एकता र सरकारको प्रभावकारिताका विषयमा नेताहरूबीच मतैक्य हुन सकेको छैन।
‘पार्टी संगठनको काम भद्रगोल छ, सरकारको काम प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। यस्तो बेला पार्टी बैठक बस्न नसक्दा अन्योल झन् बढेको छ’, स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘तत्काल बैठक बोलाउन, तल्लो तहसम्म एकता टुंग्याउन र सरकारको काम प्रभावकारी बनाएर लैजान हामीले शीर्ष नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छौं।’
स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा (प्रभाकर), योगेश भट्टराई, पौडेललगायतका नेता संगठित रूपमै दबाब अभियानमा लागिपरेको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ।
Posted on November 13, 2018 Author Categories पत्रपत्रिकाबाट, फिचर न्युज, मुख्य समाचार, राजनीतिLeaveacomment on किन आयो नेकपा एकता प्रक्रियामा शिथिलता ?
१४ औँ महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने कांग्रेस पूर्वसंस्थापनका नेताहरुले सक्रियता बढाएका समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
सोमबार सुजतानिवास मण्डिखाटारमा सात नेताले बिहानको खानासहित छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा कोइराला परिवारबाट सुजतासहित महामन्त्री डा. शशांक, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी र डा. रामशरण महत सहभागी भए ।
Posted on November 13, 2018 Author Categories पत्रपत्रिकाबाट, फिचर न्युज, मुख्य समाचार, राजनीतिLeaveacomment on देउवाविरुद्ध पूर्वसंस्थापनको मोर्चाबन्दी, सुजतानिवासमा सात नेताको भेला
ओलीले आफु प्रधानमन्त्री भएको आठै दिनमा सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग आफुमातहत ल्याएका थिए ।
उनी प्रधानमन्त्री भएको नौ महिना लागिसक्दा पनि कानुन् अन्योलमा परेका छन् । विद्यमान ऐनअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत छन् ।
ती विभागमा कर्मचारीको सरुवा बढुवालगायत निर्णयसमेत तालुकवाला मन्त्रालयले गर्दै आएका छन् ।, आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।
Posted on November 13, 2018 Author Categories पत्रपत्रिकाबाट, समाचारLeaveacomment on प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएका तीनवटै विभाग अझै अन्योलमा
जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री बर्षमान पुनले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई देशमा पछिल्लो पटक भएको रुपान्तरण नचाहने शत्तिले प्रयोग गर्न सक्ने आशंका ब्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री पुनले सोमबार सदरमुकाम लिवाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
जनताको त्याग, तपस्या र बलिादानीस्वरुप आएको संघीयता, धर्मनिरुपक्षेता, समावेशीकरण र गणतन्त्र मन नपरेका शक्ति सलबलाउन लागेको बताउँदै तीनै शत्तिले विप्लवजीलाई पनि प्रयोग गर्ने सम्भावना देखिएको छ , मन्त्री पुनले भने ।
संक्रमणकालको केही अंश अझै बाँकी रहेको बताउँदै यस्तो अवस्थाको फाईदा उठाएर परिवर्तन उल्टाउने हर्कत देखिन थालेका छन् ।, आजको नेपाल समाचारपात्रमा यो खबर छ ।
Posted on November 13, 2018 Author Categories पत्रपत्रिकाबाट, मुख्य समाचारLeaveacomment on बर्षमानको आशंका— ‘विप्लवलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना बढ्यो’
राष्ट्रपति भवन बिस्तार र उपराष्ट्रपतिका लागि समाज कल्याण परिषदको भवन खाली गर्ने सरकारको निर्णय झन आलोचित हुँदै गएको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ २१ गते राष्ट्रपति भवन र निवास बिस्तारका लागि भन्दै प्रहरी एकेडेमी सार्ने निर्णय लिएको थियो ।
यसका साथै सरकारले उपराष्ट्रपतिका लागि लैनचौरस्थित समाजकल्याणको भवन खाली गर्ने समेत निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिषदको भवन सात दिन भित्र खाली गरेर अर्को स्थानमा सर्न परिषदलाई तिहारअघि नै पत्राचार समेत गरेको थियो ।
Posted on November 12, 2018 Author Categories पत्रपत्रिकाबाट, समाचारLeaveacomment on निवासका कारण विवादमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सरकारको निर्णय आलोचित
सीमावर्ती क्षेत्र ‘दारु पिउने’ अखडा !
दुई वर्षअघि भारतको बिहार राज्यमा मदिरा (रक्सी) मा प्रतिबन्ध लगाइएपछि नेपालको तराई–मधेसका सीमावर्ती क्षेत्र बहिारवासीहरुको ‘दारु पिउने दरुवा’ को अखडाजस्तै बनेको छ ।
सीमा क्षेत्रका झुपडीका मदिरा पसलहरु अहिले झकिझकाउ छन् । दारु पसलका बोर्डहरु कुनै विशेष समारोहका लागि बनाइएका स्वागतद्वारजस्तै गरी सजाइएका छन् । साँझ परेसँगै सीमापारि र वारिकै पनि ‘दरुवा’ हरुको भीडभाड बढ्छ ।
रङ्गीचंगी बत्तीसँगै हिन्दी गीत बज्न थाल्छन् अनि सम्साँझै सुनसान हुने सीमाका बजार मध्यरातसम्म गुल्जार हुन्छन् । साँझ पर्नासाथ भारतको बिहारका नाकाबाट ‘दारुपारखी’ हरु नेपाल आउन थाल्छन् । कोही सवरी साधन हुइँक्याउँदै आउँछन् भने भने कोही हिँडेरै आउँछन् ।
तराई–मधेसको सीमावर्ती क्षेत्रमा अहिले सबभन्दा बढी फस्टाएको बजार नै मदिराको भएको खबर आइतबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
Posted on November 12, 2018 Author Categories पत्रपत्रिकाबाटLeaveacomment on सीमावर्ती क्षेत्र ‘दारु पिउने’ अखडा !
अन्दोलन चर्कायो जागिर कुम्ल्यायो ! पहुँचवालाहरुकै वर्चस्व…
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल राहत शिक्षक संघर्ष समितिबीच २२ असोज, ०७५ मा तीनबुँदे सहमति भयो ।
सानोठिमीस्थित शिक्षा विभागमा भएको त्यो सहमतिबट शैक्षिक उपलब्धिका दृष्टिले सर्वाधिक निम्छरा बनेका सरकारी विद्यालयलाई झन् ध्वस्त पार्ने जोखिम बढेको छ । सरकार र राहत शिक्षकबीच भएको सहमतिमा संघीय शिक्षा ऐनमार्फत राहत शिक्षकहरुलाई स्थायी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।
यसअनुसार अस्थायी शिक्षकलाई जस्तै राहत शिक्षकहरुलाई पनि स्थायी गरिनेछ । सरकारी विद्यालय शिक्षा बर्बादीको मूल कारण परीक्षाविनाका यिनै शिक्षक हुन् ।
सरकारी विद्यालयमा बाहेक अरु सरकारी नियकामा यति ठूलो जनसंख्याले खुला जाँचविना जागिर खाने अवसर नपाएको खबर आइतबारको नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
Posted on November 12, 2018 Author Categories पत्रपत्रिकाबाट, शिक्षाLeaveacomment on अन्दोलन चर्कायो जागिर कुम्ल्यायो ! पहुँचवालाहरुकै वर्चस्व…
कुखुरालाई सुनाइन्छ लोकगीत, त्यो पनि प्राविधिक नै खटिएर ‘वुफर’ बाट !
कुखुराले पनि गीत सुन्छ । त्यो पनि लोकगीत । चन्द्रपुर– ४ स्थित ठाडाटोलमा सञ्चालित आर्इएस पोल्ट्री फार्मका कुखुरामा नियमित लोकगीत सुन्ने यस्तो बानी परेको छ ।
कुखुरालाई गीत सुनाउनैका लागि फार्ममा ‘वुफर’ झुन्डाइएको छ, जसमा थरीथरीका नेपाली गीत बजाइन्छ । गीत सुन्न पाएपछि कुखुरा शान्त हुन्छन् । त्यति मात्र होइन, कुखुरालाई गीत सुनाउन एक जना प्राविधिक नै खटिएका छन् ।
फार्म आसपास कुनै गाडी वा ठूलो आवाजसहित मानिस दौडिँदा पनि कुखुरा तर्सिने र एक–अर्कामा च्यापिएर मर्न सक्ने भएकाले ती कुखुरालाई लोकगीतको तालमा झुम्ने बानी पारिएको सञ्चालक फिरोज श्रेष्ठले बताए ।
संगीतको तालमा ध्यानमग्न भएपछि कुखुराले अण्डा धेरै पार्ने उनको दाबी रहेको खबर सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकशित छ ।
Posted on November 12, 2018 Author Categories पत्रपत्रिकाबाटLeaveacomment on कुखुरालाई सुनाइन्छ लोकगीत, त्यो पनि प्राविधिक नै खटिएर ‘वुफर’ बाट !
‘आगो निभाउन’ पुग्यो पानीविनाको दमकल !
बैतडीमा पानीविनाको दमकल राख्ने गरिएको पाइएको छ । पाटन नगरपालिका– ४ वस्ती ,जोलबाँजमा आइतबार बिहान आगलागी हुँदा ‘आगो निभाउन’ पुगेको थियो– पानीविनाको दमकल !
स्थानीय शेरसिंह महारको खरको थुप्रो र परालमा आगलागी हुँदा करिव ७० हजार बराबरको क्षति भएको इलाका प्रहरी कार्यालय पाटन, बैतडीले जनाएको छ । आइतबार बिहान साढे ४ बजे घरपरिवारले थाहा पाएपछि प्रहरीलाई खबर गरे ।
त्यसपछि प्रहरी टोली घटनास्थलमा खटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय पाटन, बैतडीका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंहले बताए । त्यसपछि बोलइएको दमकल आगो निभाउन भन्दै पानीविना रित्तै पुगेको खबर सोमबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
Posted on November 12, 2018 Author Categories पत्रपत्रिकाबाटLeaveacomment on ‘आगो निभाउन’ पुग्यो पानीविनाको दमकल !
पोस्टमार्टम गर्न यसकारण मानेनन् डाक्टरले !
एचआर्इभी संक्रमितको महिलाले विष खाएर आत्महत्या गरेपछि उनको शव पोस्टमार्टमका लागि धादिङ जिल्ला अस्पताल ल्याइयो ।
तर, डाक्टरले पोस्टमार्टम गर्न नमान्दा शव दुई दिनसम्म अस्पतालको मूर्दाघरमै थन्कियो । मृतक एचआर्इभी संक्रमित भएको भन्दै डाक्टरले पोस्टमार्टम गर्न नमानेका हुन् ।
नीलकण्ठ नगरपालिका– ५, खाल्टे, धादिङकी ३७ वर्षीया शर्मिला श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) ले गत शुक्रबार बिहान विष खाएकी थिइन् । उनी शौचालय आउने–जाने र उल्टी गर्न थालेपछि छोरीले आफूलाई खबर गरेको मृतकका श्रीमानले बताएको खबर सोमबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
Posted on November 12, 2018 Author Categories पत्रपत्रिकाबाटLeaveacomment on पोस्टमार्टम गर्न यसकारण मानेनन् डाक्टरले !